Waa maxay sababta aad u heli lahayd shahaadada CISSP?
Ma dooneysaa inaad hesho aqoonsi CISSP, laakiin ma hubo saameynta uu ku yeelan karo xirfadlahaaga xirfadeed? Waa hagaag! Waxaad ku timid meesha saxda ah! Waxaan kuu sheegi doonaa sababaha ugu sarreeya ee ku saabsan sababta aad u heshay shahaadada CISSP.
Waa maxay shahaadada CISSP?
Maxaad u heshaa Shahaadada CISSP?
Maxay tahay mushaharka caadiga ah ee xirfadle aqoonsi leh ee CISSP?
CISSP waa qormo loogu talagalay Macluumaadka Aqoonsiga Nidaamka Nabadgalyada Nidaamka. CISSP waa shahaadada asturnaanta ee IT-da ee loo qaabeeyey oo ay ka samaysay Heshiiska Shahaadada Aqoonsiga Nidaamka Nidaamka Nidaamka Nidaamka Nidaamyada Nidaamka Warfaafinta (ISC2). ISC2 waa urur aan faa'iido doon ahayn kaas oo ku takhasusay qeexidda heerarka amniga IT-da ee adduunka. ISC2 waxay haysaa Aqoon guud oo Cilmi (CBK) ee amniga internetka oo bixiya shahaadooyin kale oo caalami ah oo la aqoonsan yahay ee IT-da.
CISSP waa shahaadooyin heer sare ah oo loogu talagalay xirfadlayaasha khibradda leh ee khibradda leh ee leh khibrad la aqoonsan yahay oo ku saabsan maareynta amniga macluumaadka ee deegaanka ganacsi. Qaadashada tababarka aqoonsi ee CISSP oo ka timi hay'ad la aqoonsan yahay, sida ITS Tech School, oo la ansixiyay ISC2, ayaa bixisa baaxad weyn oo loogu talagalay barashada isla markaana kor u qaadeysa suurta galnimada musharraxa ee lagu nadiifinayo imtixaanka CISSP.
Waxaa jira faa'iidooyin aan la tirin karin ee helitaanka a Shahaadada CISSP. Halkan waxaan ku qori doonnaa Sababaha 5 ee ugu sarreeya si loo helo CISSP shahaadada:
Kordhinta baahida loo qabo Xirfadaha Macluumaadka Nabadgelyada: Caalamka, dhacdooyinka jebinta amniga macluumaadka waxay ku qasbeen korodhka kharashka ururinta ee ammaanka IT-da. Miisaaniyado kala duwan ayaa loo qoondeeyey gaar ahaan amniga IT, taas oo macnaheedu yahay inay kor u kacayso shaqaaleynta xirfadlayaasha infosec.
Baaxadda Shaqada Wide: Shaqaale xirfadle ah oo CISSP ah ayaa awood u leh in uu la qabsado noocyo kala duwan oo khatar badan oo internetka ah iyo weeraro, sidaas darteed shakhsi ahaan xirfad leh oo aqoon leh. Ma jiraan wax shaqo ah oo ku saabsan xirfadahan oo kale oo maamuli kara noocyo kala duwan ammaanka internetka xirfadaha, kuwaas oo ay ka mid yihiin - Asset Security, Ammaanka Barnaamijka, Ammaanka Network, Maareynta Dhacdada iyo Soo Celinta Musiibada oo ka dhexjirta kuwa kale.
Shahaadada waxay ku dareysaa Aqoonsiga Xirfadaha:Aqoonsi shakhsiyadeed oo CISSP ah oo la aqoonsan yahay iyo ixtiraamka xirfadahooda iyo aqoonta laga helay khibrad wax ku ool ah iyo helitaanka xaalad shahaadad leh. Imtixaanka CISSP ma aha mid sahlan oo lagu kala furfuro; Si kastaba ha noqotee, mar marka la tirtiro oo shahaadada la helo, waxaa loo aqoonsan yahay inay tahay heerka Gold ee loogu talagalay ammaanka IT-da adduunka.
Celceliska Mushaharka ee xirfadlaha aqoonsiga CISSP, sida uu qabo Daraasada Global Amniga Ammaanka Shaqada (2015), waa US $ 103,117.
Faa'iidooyinka qaadashada koorso CISSP ah oo ka timaada hay'ad awood u leh sida ITS Tech School oo aad uga culus badan walwal iyo walwal aad qabto. Haddii aad rabto inaad xirfad shaqo ku qaadato amniga macluumaadka ilaa heer sare, CISSP ayaa dhab ahaan kaa siin doonta baalasha!
La xariira:Maxay shirkadu uga rabaan Xirfadayaasha Amniga iyo Admins CEH Certified?
CEH v10 Maxaa cusub? V10 Shahaadada Soodhawrka ah ee Shahaadada ah ee La Siiyay